यसरी प्रयाेग गराैँ सनस्क्रीन - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
यसरी प्रयाेग गराैँ सनस्क्रीन
डा.अनिल कुमार भट्ट, छाला तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ
सुर्यबाट आउने किरणमा यूविए, यूविबि, यूविसी, भिजिबल लाइट लगायत विभिन्न लाइटहरु हुन्छ । जसमध्ये पराबैंगनी किरण जस्मा युविए र युविबिले छालालाई केहि नकारात्मक असर गर्छ । यी पराबैगनी किरणबाट बच्नको लागि हामीले सनस्क्रीन लगाउनु पर्ने हुन्छ ।
युविबिले छालाको क्यान्सर र सनबर्न हुन्छ भने युविएले चाउरीपना, चाँया, पोतो छालाको विभिन्न समस्या र एलर्जी जस्ता समस्याहरु निम्ताउने गर्छ ।
कति एसपिएफको सनस्क्रीन लगाउने ?
एसपिएफ ३० र एसपिएफ ५० कतिको सनस्क्रीन लगाउने भन्ने प्रश्न धेरैको हुन सक्छ । एसपिएफ ३० र एसपिएफ ५० मा खासै धेरै फरक हुँदैन । साधारणतया ३० एसपिएफ लगाउँदा पनि हुन्छ । तर जस्को अनुहारमा चाँया, पोतो, कालो दागहरु छ उनीहरुले एसपिएफ ५० लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।
एसपिएफ भनेको सुर्यको नकारात्मक किरणहरुबाट बचाउने कारक हो । यसले पराबैगनी किरण बि बाट बचाउँछ । तर, सनस्क्रीन लगाउँदा एसपिएफ मात्र नभईकन पराबैगनी किरण ए पनि भएको हेर्नु पर्छ । यदी (PA+++) अथवा ४ वटा प्लस भएको सनस्क्रीन छ भने त्यो अझ राम्रो हुन्छ ।
कुन सनस्क्रीन लगाउने ?
सबै भन्दा पहिले आफ्नो छाला कस्तो प्रकारको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ । आफ्नो छाला अनुसारको सनस्क्रीनको प्रयोग गर्नु पर्छ । चिल्लो छाला छ भने पानी तथा जेल बेस सनस्क्रीनको प्रयोग गर्नु पर्छ । सामान्य छाला छ भने जुनसुकै लगाउँदा पनि हुन्छ । सुख्खा छाला छ भने क्रिम बेस सनस्क्रीनको प्रयोग गर्नु पर्छ । त्यो बाहेक कसैकसैको छाला धेरै संवेदनशील छ भने मिनिरल्स सनस्क्रीनको प्रयोग गर्नु पर्छ ।
मुहार चम्किलो र सुन्दर बनाउन लगाउनुस् यस्ता फेस प्याक - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] पनि…यसरी प्रयाेग गराैँ सनस्क्रीनशरीरको तौल घटाउन सेवन गर्नुहोस् यी ८ […]